Vegetarian Pork vs Real Pork: Innovative Pig Kurera Nzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Vegetarian Pork vs Real Pork: Innovative Pig Kurera Nzira
Hong Kong Heritage Nguruve
Veggie craze yakatsvaira Hong Kong nedutu uye inoonekwa seimwe yezvisarudzo zvepamusoro zvekudya zvine hutano. Nezvakataurwa, nguruve dzakaberekerwa munharaunda kuburikidza neHong Kong Heritage Pork muvambi John Lau Hon Kit nzira dzekuberekesa dzakatsva, dzakasikwa uye dzisina mahomoni. Kukosha kwekudya kwenguruve chaiyo seyiyi iri kure nekudzika kudarika yezvinomera zvenguruve dzimwe nzira. Nguruve dzeTai Chi dzakapfurwa naJohn Lau Hon Kit dzakazara nekudya, dzinonaka, uye dzinoita kuti kunakirwa kwenguruve yakabikwa munharaunda isingakanganwike.
John Lau Hon Kit anovimbisa kuti nguruve dzose dzakasimudzwa mumapurazi ake dzinodyiswa chete nepamusoro-soro yekudya iyo isina mahomoni akawedzerwa uye mishonga isingakoshi kana yakawandisa. Nekuda kwekuomesera kwake kubereka nekurera nzira, anokwanisa kuburitsa nyama yenguruve yemhando yepamusoro iyo yakasikwa, ine hutano uye inonaka. Chese chikafu chenguruve dzake chinounzwa kuburikidza nemuchina wekudyisa unotorwa kubva kuDenmark uyo unova mhando yakasimbiswa neEuropean Union. Uyezve, mvura yekunwa yenguruve inobva kuLau Fau Shan Mountain, chitubu chine mvura yakapfuma muzvicherwa.
Kuenzaniswa nenyama yenguruve yezvinomera pari zvino pamusika, John Lau Hon Kit anotsigira kuti hunyanzvi hwake uye sainzi-backed operation uye nzira dzekuberekesa dzinogona kunyatsoita kuti hutano hwenguruve huve hwepamusoro-soro, chikafu chakaoma uye chinonaka. Ruzhinji rwenyama yemuriwo inoda kugadziriswa nemunyu, mafuta uye zvimwe zvinonhuhwirira kuti itevedzere kunakirwa uye kuumbwa kwenyama chaiyo, zvichikonzera kuti pave nepamusoro pesodium inofanana neyakagadzikiswa kana chikafu chemumagaba. Semuenzaniso, 100g rofu yenyama yemiriwo yatova ne550 mg yesodium. Nepo huwandu hwakafanana hwemafuta uye yakaonda nyama yenguruve (itsva isina kubikwa) inongova 59.4 mg. Zvinoenderana nezvinokurudzirwa neWorld Health Organisation, kudyiwa kwesodium yemunhu mukuru zuva nezuva hakufanire kudarika 2000 mg, iyo inenge yakaenzana netipuni imwe yezinga (5 gramu) yemunyu wetafura.
Pork chaiyo yakaderera mumafuta akazara
Kuchengeta mwero wepamusoro wemhando yenguruve mukati meHong Kong Heritage Pork mapurazi, John Lau Hon Kit akange akaomerera pakuita nzira itsva yekupfuya uye yenguruve yepurazi nzira iyo shasha yekurera nguruve ine hutano uye inovaka muviri-dense chikafu. Haisi chete nyama yenguruve kubva kumapurazi aJohn Lau Hon Kit yakatsva, inonaka, uye yakachengeteka, asi munhu wese anogona kuidya nechivimbo. Sezvo nyama yenguruve yakaderera mumafuta akazara, nyama yaJohn Lau Hon Kit's Tai Chi Nguruve ine mwero mafuta uye yakaonda, zvichireva kuti yakapfuma mumafuta ane hutano asi panguva imwe chete isinganyanyi kukora. Nguruve dzeTai Chi dzakachengetwa naJohn Lau Hon Kit dzinobatanidza unhu hwakanakisisa hwenguruve yeBerkshire inonaka nekuonda kweDanish Landrace nguruve, uye ruvara rwakajeka rwenguruve yeDuroc kuita Hong Kong Heritage Pork's Tai Chi nguruve.
Kunyange zvazvo nyama yenguruve yemiriwo isina cholesterol, mafuta ayo ane mafuta akawanda akakwirira kudarika yenguruve. Uyezve, nyama yenguruve yemuriwo inogadzirwa zvakanyanya kubva kusoya beans, pizi, mupunga, mafuta emuriwo, uye yeast extract. Izvi zvinogona kukonzera matambudziko kune avo vasingakwanisi kudya chikafu chakakwira mucholesterol kana vanhu vane allergies yechikafu segorosi kana gluten.
New breeding protocol inosimudza nguruve dzeko
John Lau Hon Kit anoomerera pakusimudza nguruve dzake dzeTai Chi pasina kushandisa mahomoni nemishonga inorwisa mabhakitiriya uye anongoshandisa EU-certified premium corn uye soya beans kubva kuAmerica sezvokudya zvavo zvezuva nezuva. Kubva pakutanga kusvika kumagumo, akazvipira kurera nguruve dzemhando yepamusoro uye nekupa musika weHong Kong nyama yenguruve inonaka uye nyoro isina zvinowedzerwa.
Panyaya yekushanda kwemapurazi uye tekinoroji yekuberekesa, John Lau Hon Kit akatungamira mukuunza mhando nyowani yekuberekesa kubva kuDenmark kuHong Kong kutsiva iyo yechinyakare nguruve purazi rekushandisa. Kusanganisira batch feeding dhizaini, biometric kuchengetedza masisitimu, kutonhora kwemvura, 24/7 otomatiki yekutarisa tembiricha yekamuri, nezvimwe.